मेरो रगत बग्यो भने यही पवित्र माटोमा मिलोस्, नलागोस् खोट, आदर्श बाँचिरहोस् -विप्लब – Rapti Khabar
मेरो रगत बग्यो भने यही पवित्र माटोमा मिलोस्, नलागोस् खोट, आदर्श बाँचिरहोस् -विप्लब
यी माथिका हरफहरु वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो प्रतिबन्धित जिबनबारे ने.क.पा.का महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लब’ले दिएको अभिव्यक्ति हो । खबर हवका लागि जीवराम भण्डारीले महासचिब विप्लबसंग अन्तर्वार्ताका क्रममा अन्तिममा सोधेका छन, ‘तपाईं भूमिगत कि अर्धभूमिगत ? स्वदेशमा कि विदेशमा ? प्रचण्ड नेतृत्व समयकै जस्तो त होइन ?
विप्लबले साहित्यिक प्रतिबद्दता सहितको भावनात्मक जबाफ दिएका छन्, मेरो रगत बग्यो भने यही पवित्र माटोमा मिलोस्, शरीर ढल्यो भने प्रिय सहिद-सपूतहरूसँगै सुतोस् ! नलागोस् खोट, आदर्श बाँचिरहोस्, खपेर सारा चोट सपना चम्किरहोस् !
हेर्नुहोस बिप्लव संगको समसामयिक बिषयमा लिएको ताजा अन्तर्वार्ता ।
हाम्रो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य हो । यो व्यवस्थाले जनताको जीवनलाई कष्टकर, कङ्गाल, पराधीन मात्र बनाएको छ । देशलाई टाट पल्टाउँदै लगेको छ । देशलाई बेचेर खानेबाहेक केही गरेको छैन । हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । अनि हामीले स्थापना गर्न चाहेको राज्यसत्ता वैज्ञानिक समाजवाद हो जुन व्यवस्थामार्फत पुँजीवादले मानव जीवनमा लादेका सारा विभेद, उत्पीडन, शोषण,
लुट, अशान्ति, युद्ध, अतिक्रमणलाई समाप्त पार्दछ । साथै यसले जनताका लागि समानता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछ ।
हो, एउटा समय यस्तो थियो । मैले माथि नै चर्चा गरेँ । समयले सबै भ्रम प्रचारलाई साफ पारिदिएको छ । अहिले यसको चर्चा छैन । कसैको दिमागमा केही छ भने पनि उसलाई बेरोजगारीको खाडलमा सडिरहेको जीवनभित्र घोत्लिन र सक्रिय हुन मद्दतै गर्छ । चिन्ता लिनु पर्दैन । हामी
वैज्ञानिक समाजवादका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको मार्गमा छौँ । यसले नेपाली जनताको मन जित्दै सफलता चुम्नेछ ।
पार्टीको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम?
तपाईं भूमिगत कि अर्धभूमिगत ? स्वदेशमा कि विदेशमा ? प्रचण्ड नेतृत्व समयकै जस्तो त होइन ?
नेकपासँग एकीकरण नगरे विप्लवको पार्टी सिद्धिन्छ
भक्तपुर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपा एकीकरणमा आउनै पर्ने र नआए सिद्धिने चेतावनी दिएका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसन भक्तपुरले शुक्रबार यहाँ गरेको ‘आजको सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीका विचार’ विषयक विचार गोष्ठीमा नेता पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। मदन भण्डारीको ६८ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले […]
Posted on August 10, 2019 Author Rapti Khabar
साउन २५, मलंगवा । सर्लाहीको मलंगवाबाट काठमाडौं जादैं गरेको बस धादिङको सलाङघाटस्थित त्रिशुली नदीमा खस्दा मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ। ४२ जना यात्रु र ३ जना बस स्टाफ बोकेको ना ६ ख ७४६९ सृष्टि डिलक्स शुक्रबार बिहान ३:३० बजे खसेको थियो । बसमा सवार २० जना अहिलेसम्म हराइरहेका छन् भने १६ जनाको जिवितै उद्धार […]
घरको पर्खाल सडकमा परेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले आफ्नै घरमा डोजर चलाएका छन् । इटहरी-१७ स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको उनको घरको पर्खाल सडकमा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भए पछि मंगलबार उनले डोजर लगाएर भत्काएका हुन् । पत्रकारको नाकको डाडी भाँच्न बजेट छुट्याएको भनेर चर्चामा आएका मेयर चौधरीले यस अघि सार्वजनिक जग्गा मिचेर […]
आर्थिक अभाबका कारण पम्फी वलीको बिगत ५ बर्ष देखि उपचारमा समस्या, सहयोगको याचना
‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’ -गगन थापा